Oovimba beNdaba-Funda ukuRhweba
IiRekhodi zeDola yaseMelika ziGqibela kakhulu iVeki eVala kwiinyanga ezili-13 phakathi kweZicwangciso zokuHakeka kwezinga le-Fed
The Idola yaseMelika ngoku iyasokola ukubuya umva kwinto enokuba yeyona iphezulu yokuwa kwayo kweveki kwisithuba sonyaka ngolwesiHlanu, njengoko abatyali-mali beye barhoxa kwi-greenback njengoko bekholelwa ukuba ukunyuswa kwesantya okunokwenzeka kulo nyaka kuxatyiswe ngokupheleleyo.
Idola yawa ngokuchasene noninzi lwabakhuphisana nabo emva kokukhutshwa kwedatha ebonisa ukuba izinga lokunyuka kwamaxabiso elizwe libuyele kwiminyaka engama-40 ephezulu. Ngaloo nto, abarhwebi abaninzi baye bakhanyisa ukubonakaliswa kwabo kwe-USD de kuvele indlela ecacileyo.
Isalathiso sedola (i-DXY), elandelela ukusebenza kwedola ngokuchasene nabakhuphisana nabo abakhulu abathandathu, okwangoku bathengisa nge-0.94% yeveki, ukuhla kakhulu kweveki ukusuka ngoDisemba 2020. Ukuhla kweveki kwakhona kuzisa ukuphela kweenyanga ezintandathu. -irali ende.
I-US Dollar Rekhoda Iinyanga ezininzi eziphantsi ngokuchasene nabakhuphisana nabo
I-euro yenyuka ngaphezu kwe-1% malunga nedola kule veki, inceda ukuba itshitshise isimo sayo sangaphambili soluhlu olubonwe ukususela ngoNovemba 2021. I-EUR / USD inyuke kwi-1.1482 kwiseshoni yokuqala yase-Asia namhlanje kwaye ibonakala ingathinteli ekubuyiseleni i-1.1500s ephezulu.
Idola iphinde yehla ngokuchasene ne-yen yaseJapan ngaphezulu kwe-1.5% kule veki, ikhandlela layo leveki libi kakhulu ukusukela ngoJuni ka-2020, kwaye yahlaziya uDisemba ka-2021 ephantsi nge-113.63. Iyen ifumene ukonyuswa okungephi kwisilayidi samva nje kwizitokhwe zehlabathi, nto leyo ebangele ukwanda komdla weemali ezikhuselekileyo njengeyen. Ngeli xesha, iReuters isanda kutyhila ukuba iBhanki yaseJapan (i-BoJ) icinga ngeendlela zokuqalisa i-telegraphing yesantya esinokunyuka.
Njengoko bekutshiwo ngaphambili, ooyeha be-greenback beza njengexabiso lentengiso kwiinqanaba ezine ezinokunyuka kwesantya kulo nyaka. Nangona kunjalo, izivuno zexesha elide ziye zehla kancinci kulandela izimvo zamagosa e-Fed malunga nokucofa i-balance sheet ye-apex bank.
tags yaqikelelwa, Forex, iindaba, KwiDola yaseMelika
I-Sterling Gallant ngoLwesine njengabaTyalo-mali balindele ukunyuka kweRhafu kwi-BoE
I-Sterling inyuse incopho entsha yeenyanga ezintlanu ngokuchasene nedola kwiseshoni yaseLondon ngoLwesine kwi-1.3748 kodwa yahlala ingatshintshi ngokuchasene ne-euro, njengoko abatyali-mali bahlala bebambelele kwixabiso lokunyuka kwexabiso elivela kwiBhanki yaseNgilani.
I-GBP ifumene ukongezwa kubatyali-mali njengoko bekulindelwe kunyuso olongezelelekileyo lokunyuka kwezinga phakathi kokukhutshwa kwezitofu zokugonya i-COVID kubemi kunokuba kusetyenziswe iindlela ezingqongqo zokutshixa.
Ngeli xesha, ipowunti yaseBritane ikhangeleka ingothuswanga luxinzelelo lwezopolitiko olulandela iNkulumbuso u-Boris Johnson, osandula ukuxolisa epalamente ngokuququzelela indibano yentlalontle ngoMeyi ka-2020 ngexesha lokuvalwa.
Sterling yenyuka ngokuchasene ne-greenback ngamanqaku angama-400 namhlanje ekuseni emva kokubuyisela inqanaba eliphezulu ukususela ngoNovemba 4 kwi-1.3695 ngobusuku.
Ngeli xesha, isalathiso sedola yaseMelika (DXY) yawela kwinani elitsha leenyanga ezimbini eziphantsi kulandela ukukhutshwa kwedatha embi yokunyuka kwamaxabiso, ebonisa ukuba amaxabiso anyuke ngoDisemba njengoko izazi zezoqoqosho zaziqikelela.
I-Sterling Records Iinyanga ezininzi eziPhezulu ngokuchasene ne-Euro phakathi kwe-Hawkish BoE Outlook
I-pound yaseBrithani iphinde yenyuka nge-0.1% malunga ne-EUR namhlanje kwi-83.50 pence, emva kokubetha inqanaba eliphezulu ngokubhekiselele kwimali enye ukususela ngoFebruwari 2020 ngoJanuwari 11. Abahlalutyi base-Unicredit baphawule ngamandla avuselelweyo e-GBP, beqaphela: "Iponti ihleli ikwimeko engcono logama nje iimarike ziqhubeka zibona amathuba okuqiniswa ndlongo yiBhanki yaseNgilani kulo nyaka."
Oko kwathiwa, iimarike ezinkulu sele ziqalise amaxabiso kwi-80% ithuba lokunyuka kwe-0.25% yenzala ngoFebruwari. Abahlalutyi be-ING baveze ukuba: "Iimarike zibonakala zithandabuza kakhulu amaxabiso kuko nakuphi na ukungazinzi kwezopolitiko e-UK, iphawundi isafumana amanqaku njengeyona mali iqhuba kakuhle ngo-2022." Abahlalutyi bongeze ukuba:
"Siyaqhubeka nokuthanda i-EUR/GBP ezantsi kunye nekhefu elingaphantsi kwe-0.8300 kwixesha elikufuphi, kwaye olunye usuku olulungileyo lokuziva umngcipheko lunokunceda i-beta ephezulu ye-GBP ifumane umhlaba ongakumbi."
tags BOE, yaqikelelwa, Forex, IGBP, iindaba
Idola yase-US ithintelwe kwi-Bias esecaleni njengoMrhwebi uJonga Phambi kwiNgqungquthela kaPowell
The Idola yaseMelika index (DXY) igcine i-sideways bias kwiseshoni yokuqala yokurhweba ngoLwesibini njengoko abarhwebi bahlala besecaleni phambi kwe-Fed Chair Jerome Powell obambeleyo ukuva ukutyunjwa kwengqungquthela kamva namhlanje, ukuze bafumane ulwazi malunga nokuchithwa kwexabiso elinokwenzeka.
Kwintetho yakhe yokuvula epapashwe izolo, uPowell uya kwenza isifungo sokunciphisa ukunyuka kwamaxabiso okugqithisileyo “emiliselwe” kodwa ebengayi kuthetha ngezicwangciso zomgaqo-mali we-Fed.
Oko kuthethiweyo, uPowell uza kuthatha imibuzo kwiiseneta njengoko eceba ukungenela ukhuphiswano lwesibini seminyaka emine phantsi kolawulo lweBiden.
Idola yaseMelika iZinzile nangona iHawkish Fed Stance
I-DXY, elandelela ukusebenza kwedola ngokuchasene nabalingane abathandathu, bathengisa malunga ne-95.80 (idatha yexesha lokushicilela) kwiseshoni yokuqala yaseLondon ngoLwesibili.
I-greenback yabetha i-16-month-month ye-96.93 ngoNovemba 24 phakathi kwesigxina se-hawkish ngabaqulunqi bomgaqo-nkqubo base-US kodwa sele iwele kwipatheni yecala phakathi kwe-96.70 kunye ne-95.60, nangona kunokwenzeka ukuba kunyuke ukunyuka kwekota yesine kulo nyaka.
Ngeli xesha, amaqhinga kwi-TD Securities aphikisana ukuba kubonakala ngathi i-Fed ingaba "kungekudala" imo yazo zombini iqondo lenzala ukunyuka kunye nokunciphisa ukuvezwa kwebhondi kwiphepha layo lomncono, inkqubo abayibiza ngokuba yi-quantitative tightening (QT). Iingcali zobuchule zibhale ukuba:
"Isiqinisekiso sokuqiniswa kuka-Matshi kunye ne-QT yokuqala kufuneka ixhase ukuqina kwe-USD ngokubanzi, nangona kuluhlu olumiselwe kakuhle."
Iingcali zeTD zilindele ukunyuka kwexabiso lokuqala ngoJuni, nangona kusithiwa kunokuza kwangoko ngoMatshi. Oko kwathiwa, iimarike zemali sele zinexabiso lokunyuka ngoMeyi, kunye nezinye ezimbini ngoNovemba.
Kwezinye iindaba, idatha ye-inflation ye-US ngoDisemba yabathengi iya kuhla ngomso, kunye nedatha ye-CPI elindeleke ukuba yehle nge-7% ye-YoY enkulu, inyuse ngakumbi amathuba okunyuka kwamaxabiso kwangaphambili.
tags uhlalutyo, DXY, Forex, iindaba, KwiDola yaseMelika
← Entsha izithuba1 2 ... 86 abaDala izithuba →